आखिर किन शाहरुखलाई गालामा चड्काउन चाहान्छिन् अभिषेककी ममी जया ? खोलीन् मुख « The News Nepal
आखिर किन शाहरुखलाई गालामा चड्काउन चाहान्छिन् अभिषेककी ममी जया ? खोलीन् मुख
काठमाडौँ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फिल्म उद्योग मानिएको बलिउडमा कलाकारहरुबिच विबाद हुनु र मनमुटाव हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । शाहरुख खान सलमान खानबिच लामो समय बोलचाल नै बन्द भयो । कारण थिइन् ऐश्वर्या । त्यस्तै प्रेमी अभिषेकका कारण ऐश्वर्या र रानी मुर्खजीबिच अहिले पनि बोलचाल छैन ।
उनीहरु मिल्ने साथी हुँदा हुँदै अहिले एक अर्काका दुश्मन जस्ता भएका छन् । बदला स्वरुप यि दुईले एकले अर्कालाई आ आफ्नो विबाहमा त बोलाएनन् नै । र अहिले पनि सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभएको भारतीय मिडियामा बेला बेलामा रिर्पोटहरु आइ नै रहन्छन् ।
यसैबिच यतिबेला फेरी अभिषेककी आमा जया वच्चनले शाहरुखलाई चड्कन हान्न चाहेको भन्ने खबर बाहिर आएको छ । कुनै समय शाहरुखले ऐश्वर्यलाई नराम्रो गरेको कारण त्यसको उत्तर उनले झापडले दिन चाहेकी थिइन् । त्यस समय अभिषेक बच्चनको विवाह ऐश्वर्यासँग भइसकेको थियो । शाहरुखको उक्त बयानका कारण जया बच्चन खुबै रिसाएकी थिइन् ।
उनले शाहरुख खानलाई झापड हान्ने मन बनाएको समेत बताएकी थिइन् । एक अन्तर्वार्तामा उनले शाहरुखमाथि रिस पोखेकी थिइन् । जुन कुरा उनले हिजो आजका अन्तरवार्तामा पनि बताउने गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन् हालसम्म पनि शाहरुखसँग खुलेर कुरा गर्ने मौका मिलेको छैन । यस विवादका बारेमा उनीसँग म छिट्टै कुरा गर्नेछु ।
म उसलाई त्यसरी नै झापड हान्थे जसरी मैले अभिषेकलाई हान्ने गर्छु र उनको यही अभिब्यक्ति पनि मिडियाले प्रतिप्रश्न गर्दै सोध्ने गरेका छन् के उनले भने जसरी झापड हान्लिन् त रु त्यो भने समयले नै देखाउला ।